Archive du 20190729
Fiara nitondra mpanao baolina tra-doza Olona 3 maty, 13 naratra mafy
Olona 3 no maty tsy tra-drano ary 13 kosa naratra mafy vokatry ny lozam-pifamoivoizana niseho tany Morondava amin’iny lalam-pirenena faha-35 iny ny sabotsy 27 jolay lasa teo.
Fandaminam-potoanan’ny fitondrana Mampametra-panontaniana
Mampametra-panontaniana mandrak’ankehitriny ity fitiavan’ny fitondram-panjakana manao zavatra mody masoandro na alina mihitsy ity.
Naivo Raholdina Mampanahy ny hoavy politikany
Mampanahy ny hoavy politikan’ny depiote eny amin’ny boriborintany fahadimy eto Antananarivo Atoa Naivo Raholdina taorian’ilay ampamoaka goavana ny faran’ny herinandro teo, izay nilazan’ny fampahalalam-baovao fa tsy atoro voanjo hadiana amin’ny fanodinkodinana tany ny tenany.
Kianja manara-penitra ao Morondava Ho vita tanteraka amin’ny volana novambra izao
Ny 90 isan-jaton’ny kianja manara-penitra ao amin’ny distrikan’i Morondava, faritra Menabe no efa vita, raha ny tatitra voaray tamin’ny minisitera mpiahy.
Fifanintsanana CHAN 2020 Lavon’ny Barea Malagasy 1-0 i Mozambika
Tany amin’ny fanampin’ora 90’+2 vao nahatafiditra ny baolina tokana nandreseny ny Mambas Mozambikanina ny Barea omaly alahady 28 jolay 2019 tetsy amin’ny kianjan’i Mahamasina, eo amin’ny lalao mandroso ny dingana faha-2 amin’ny fifanintsanana fahazoana hiatrika ny Chan 2020.
Lalaon’ny nosy andiany faha-10 Laharana faha-2 i Madagasikara
Nifarana tamin’ny fomba ofisialy omaly alahady 28 jolay 2019 ny lalaon’ny nosy andiany faha-10 notontosaina tany amin’ny nosy Maorisy.
Fampiantranoana ny Lalaon’ny Nosy faha-11 Voasongon’i Maldives i Madagasikara
Tsy nahomby ny fandresen-dahatra nataon’ny filoha Malagasy Andry Rajoelina fa dia ny nosy Maldives no hampiantrano ny lalaon’ny nosy andiany faha-11 amin’ny taona 2023.
Fitandroana ny filaminana tetsy Mahamasina “Officiel de Sécurité FIFA” roa no indray nanara-maso omaly
Nilamina dia nilamina ny fitandroana ny filaminana tetsy amin’ny kianjan’i Mahamasina omaly tamin’ny fihaonanan’ny Barea sy ny Mambas. “Officiel de Sécurité FIFA” roa be izao no indray nanara-maso ny fahatomombanan’izany ka tao Atoa Andriamalazaony Aurélien tompo-mariky ny Sécurité amin’ny FMF eto Madagasikara izay nikarakara ny fandaminana rehetra tamin’ny ankapobeny.
Hery Rasoamaromaka ho filohan’ny FMF Ligy vitsivitsy naneho ampahibemaso ny fanohanana azy
Taorian’ny lalao nifandrinan’ny Barea Malagasy sy ny Mambas Mozambikana tetsy Mahamasina omaly alahady 28 jolay 2019 dia filohana ligy vitsivitsy indray no naneho ampahibemaso ny
KMG Ivato Nifarana ny « Tournoi de Pâques 2019 »
Nifarana tamin’ny sabotsy 27 jolay 2019 teo, teny amin’ny kianja 1er Rfi Ivato, ny fifaninanana baolina kitra « Tournoi de Pâques 2019 » sady fankalazana ny faha-2 taonan’ny A.A.F.I « Association des
Laharana faha 3000 ny gazety Tia Tanindrazana tonga eny am-pelatananao amin’ity alatsinainy 29 jolay 2019 ity.
Asa fihariana atody ao Mahitsy Ny 30 %-n’ireo mpandraharaha ihany no mandoa hetra ara-dalàna
Mitaraina ny amin’ny hafitsok’ireo mpandraharaha eo amin’ny sehatry ny atody ao amin’ny faritra iadidiany ny kaominina Mahitsy.
Tafakatra 41% tamin’ny taon-dasa ny taham-pampiasana fomba fandrindram-piterahana maoderina eto amintsika, raha toa ka 5% monja izany, 25 taona lasa izay.
Fitaovam-pianarana feno Ny 25 %-n’ny ray aman-dreny ihany no mahavidy
Ny 25 %-n’ny ray aman-drenin’ny mpianatra ihany isaky ny fanombohan’ny taom-pianarana ho an’ireo sekolim-panjakana no mahavita mividy fitaovam-pianarana feno ho an-janany.
Fitrandrahana drakaka anaty ala honko Miato mandritra ny 2 volana mahery
Nivoaka ny didim-pitondrana laharana 14 274 / 2019 mampiato ny fitrandrahana drakaka anaty Ala honko eo anelanelan’ny 10 aogositra-31 oktobra 2019.
Nikodiadia ilay fiara 4x4 Niara-maty izy mivady
“3 no maty, roa naratra mafy. Io no vokatry ny lozam-pifamoivoizana noho ny fanararaotana ny lalana tsara”, hoy ny zandarimariam-pirenena misahana ny fanarahamaso ny fifamoivoizana amin’iny faritra Arivonimamo iny.
Antananarivo Kitoatoa tanteraka ny hidim-baravaran’ny taksibe maro
Misy mampiasa karetsaka na tsy fiarakaretsaka aza ireo taksibe. Maro amin’ny varavaran’izy ireny no tsikaritra fa misy fahasimbana. Ao ny tsy mety mihidy ka tazonin’ny resevera amin’ny kofehy ary